March 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
🎸 ပိုက်ဆံရသောအလုပ်ကိုစွန့်လွှတ် ရဲမှသာ အောင်မြင်နိုင်မယ် လို့ ဆိုတဲ့ ဂစ်တာနိုင်ဇော် 🎸
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ဂီတ သမိုင်းမှာ ဂစ်တာ သူရဲကောင်း အဖြစ် မှတ်တိုင် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဂီတသမား တစ်ယောက် ကတော့ ဂစ်တာ နိုင်ဇော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ငယ်စဉ် ကတည်းက ဂီတ ပညာကို ရှုးသွပ် ပြီးတော့ သူ ဝါသနာပါတဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ အတွက် ကန်ထရိုက်တိုက် ဆောက်လုပ်ရေး တစ်ခုမှာ အစောင့် အလုပ် တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
နှာပိတ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ နှာချေခြင်းတို့ကို နာမကျန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက် ဓာတ်မတည့်ခြင်းလို့ ပိုသတ်မှတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို ဘာတွေက စတင်ဖြစ်ပေါ်စေလဲဆိုတာ တိတိကျကျ ဖော်ထုတ်ဖို့ အင်မတန် ခက်ပါတယ်။ မကုဘဲထားတဲ့ ဓာတ်မတည့်ခြင်းတို့က ကုသရတာ ပိုမိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးစေတဲ့ နာတာရှည်နှာပိတ်ရောဂါ ကူးစက်မှု၊ နားရွက်ရောဂါ ကူးစက်မှု၊ အိပ်မပျော်ပြသနာနဲ့ ပန်းနာရောဂါတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။
ပြန်/ဝန် ဦးရဲထွဋ် မမှားပါဘူး။ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ ပြည်သူတွေသာ မှားနေတာ။
‎Myint Thu‎ to 2015 Demo Pa Yit
. ဝန်ကြီးတွေ အိမ်ရာတွေက ဆင်းသွားပုံ သတင်းတွေကြားရပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေထဲက ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို သတိရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးကောင်းသမီးလေး ဥတ္တရာ ဘာသာခြားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတော့ ယောက်ျားခွင့်ပြုချက်မရလို့ ဥပုသ်သီလကို မစောင့်ထိမ်းရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ရတနာသုံးပါးနဲ့ ဝေးပြီး ကြာကြာမနေနိုင်ရှာတော့ သီရိမာဆိုတဲ့ ပြည့်တန်ဆာမကို ငွေပေးငှား ရမ်းပြီး ယောက်ျားအနားမှာ ကိုယ်စားထားလို့ ဥပုသ်စောင့်ခွင့် ဘုရားအမှူးရှိတဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို ဆွမ်းကပ်ခွင့်တောင်းတယ်။
‎Kyaw Swa Tun‎ to မှတ်စုကြမ်း
စေတန်ဆိုရင် တော်တော်များများစိတ်ထဲမှာ နတ်ဆိုးတွေ သရဲတွေ စတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ ပုံဖော်လိုက်ကြတာများတယ်။ တကယ့် စေတန် အယူဝါဒက radical anti-theist လို့ ပြော ရမယ်ထင်တယ်ဗျ။
ခေတ်သစ် စေတန်ဝါဒသစ်ရဲ့ ကနဦး ခြေလှမ်းက ၁၉၆၀ ဝန်းကျင်မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖန်ဆင်းရှင် ကို တော်လှန်ဖို့ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး စေတန် ဘုရားကျောင်းက ၁၉၆၀ နှောင်းပိုင်းရောက်မှ စတင် ရုပ်လုံး ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ Rap ဂီတ အပေါ်မှာကော ကိုငှက် ဘာတွေ ပြောစရာ ရှိဦးမလဲ
အင်း ဘာမှတော့ ကျွန်တော်သိပ်ပြောစရာ မရှိပါဘူးဗျ။ ဒါလဲ သူတို့လှိုင်းနဲ့ သူတို့ပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ သူတို့လှိုင်း အတက်နဲ့ ကြုံတော့ သူတို့လဲ ဒီလှိုင်းကို စီးကြတာပေါ့နော်။ ဟို အားသာချက် အားနည်းချက် ဆိုတာကတော့ တစ်ခုချင်းစီမှာ အကုန်လုံး ရှိကြတာပဲ။ Melody နဲ့ လုပ်လို့မရတဲ့ ကိစ္စကို Rapping နဲ့ လုပ်လို့ရနိုင်တယ်။ Rapping မှာ လုပ်လို့မရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း Melody မှာ လုပ်လို့ရတာဆိုတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပဲ။
ငါးမိခင်ကြီးကို ငါးသားပေါက်ကလေးများက၊ မကျေမနပ်
ငါးကလေးများ။ ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘာလဲအမေ
ငါးမိခင်။ ။ ငါးမျိုးတွေပေါ့သားတို့ရယ်၊
ငါးကလေးများ။ ။ ဒါဆို ဟိုအကောင်လေးတွေကကော
မိခင်။ ။ သူတို့က ဖားမျိုးတွေကွဲ့၊
(1) As well as ဟာ not only..but also နဲ့ ဆင်တူတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်
As well as hasasimilar meaning to 'not only ... but also’
(1.1) She’s gotagoat, as well as five cats and three dogs.
သူ့မှာ ဆိတ်တစ်ကောင် ရှိရုံသာမက ကြောင်းငါးကောင်နဲ့ ခွေးသုံးကောင်လည်းပဲ ရှိပါတယ်
(1.2) He’s clever as well as nice. smile emoticon He’s not only nice, but also clever.)
သူက တော်လည်းတော်ပါတယ် သဘောလည်းကောင်းပါတယ်
အမေရိကန် ဂျက်တိုက်လေယာဉ် အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံတွင် ပျက်ကျ
မြန်မာသမ္မသစ်ကို အမေရိကန် ဂုဏ်ပြုကြိုဆို
မင်းဘူးမြို့တွင် ကုန်တင်ကား အမိုးကိုင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးကြိုး ပွတ်တိုက်မိ၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွား
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ ဖွဲ့စည်းခြင်း
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အစရှိတဲ့ လူကြီးလူကောင်းများကမှ လူကြီးလူကောင်း မပီသဘူး။ ဂုဏ်သရေ သိက္ခာမရှိဘူး။ အဆင့်အတန်းရှိရှိ မပြုမူဘူး ဆိုလို့ရှိရင် အဲသည်နိုင်ငံဟာ ကလေကချေ၊ ပေါက်လွှတ်ပဲစား၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့ အောက်တန်းစားတိုင်းပြည် လို့ သူများတွေက ခေါ်ရင် ဘယ်လွန်ပါ့မလဲ။ ရှက်စရာကြီးနော်။ လောလောဆယ်တော့ အဲသည်လူကြီးတွေကို ဒါတွေဒါတွေတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုဒီစကားတော့ မပြောပါနဲ့။ ရှက်စရာကောင်းလို့ပါ ဆိုပြီး ရှက်တတ်လာအောင် အရင်သင်ပေးရပါဦးမယ်။ နို့ သိမှ သိကြပဲကိုးဗျ။
၁၉၅၀ခုနှစ်က ပေါင်းစပ်သီဆိုခဲ့သည်ဟု ပြောဆိုရေးသားခဲ့ကြသော ယနေ့ထက်တိုင် သင်္ကြန်၏ အမှတ်အသား ဖြစ်နေသည့် ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခို သီချင်းမှာ ၁၉၄၇ခုနှစ်ကတည်းက မန်္တလေးမြို့မတူရိယာအသင်း အတွက် ရေးစပ်သီဆို ခဲ့သည့် သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင် ခေတ်များပြောင်းလဲ၍ သင်္ကြန်အခင်းအကျင်းပုံစံများ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင် မြန်မာသင်္ကြန်အဖြစ် အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်နေသည့် ရွှေမန်းတောင်ရိပ်ခိုသီချင်းမှာ ၁၉၄၇ခုနှစ်ကတည်းက တေးရေး ဆရာ တစ်ဦးတည်း ရေးစပ်ခဲ့သည့်အကြောင်းကို
Author: lubo601 | 6:56 PM | No မှတ်ချက် |
အမေရိကန် သမ္မတတွေက အိမ်ဖြူတော်ကနေ ဘဲကျိုးတွေအဖြစ် ထွက်ရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ရင် နောက်ပြောင် ကျီစယ်မှုလေးတွေ လုပ်တတ်ကြတယ်ဗျ။ သူတို့ဓလေ့နဲ့ သူတို့ပေါ့လေ။ ကလင်တန်ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က လူတွေက နောက်တက်လာမယ့် သမ္မတအသစ် ဂျော့ ဒဗလျူ ဘုရ်ှရဲ့ အဖွဲ့က လူတွေ ဒုက္ခရောက်အောင် လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တယ်လီဖုန်းကြိုးတွေကို နံရံဆက်သွယ်ပေါက်က ဖြုတ်ထားတာမျိုး၊ တယ်လီဖုန်းအဝင် အသံတွေမှာ ညစ်ညမ်းတဲ့ စကားတွေ ပြောခဲ့တာမျိုး၊ စားပွဲကို အပေါ်က အဝတ်နဲ့ အုပ်ပြီး ကော်သုတ်ခဲ့တာမျိုးတွေ လုပ်ကာ နောက်ပြောင်ခဲ့ကြတယ်။
နောက်တက်မယ့် သမ္မတအသစ်က Gorge W. Bush ဆိုတော့ သူ့အလယ်စာလုံးမှာပါတဲ့ W စာလုံးကို အစွဲပြုပြီး ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်တွေက W စာလုံးမှန်သမျှ ဖြုတ်ယူသွားကြတယ်။
၁. အစားကောင်းများဖြင့်ထိန်းနည်း (အစာအိမ်ကိုထိန်းနည်း)
✪ ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့အဘိဓါန် ✪
Iron Cross * Lynn *
စာသား - သော်ဒီဝေ
၁ ။ ရှာလကာရည်
၂ ။ ဘီယာ
၁၉၆၈ ခုနှစ် နွေနေ့တစ်ရက်မှာ ကျနော့်စတူဒီယို အလုပ်ခန်းထဲကို အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသား ကိုထွန်းဝေ ဟာ အညာဟန်အပြည့်နဲ့ ခန့်ခန့်ညားညားကြီး ဝင်လာပါတယ်။
"အစ်ကို့ကို ဖမ်းရတာ လေဖမ်းရသလိုဘဲ၊
ကဲ … အကြမ်းငှဲ့စမ်းပါဦး"
သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်၊ ကိုယ်ပိုင်အသံနဲ့ 'ဝူး'ဆိုပြီး လေပြင်း မှုတ်ထုတ်လိုက်ရင်း ကျနော့်စားပွဲရှေ့မှာ ငြိမ့်ကနဲ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 6:40 PM | No မှတ်ချက် |
ဒီနေ့ သင်ခန်းစာကတော့ အစားအစားနဲ့ ပတ်သက်တာလေးတွေကို နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်နဲ့ ပြောဆိုပုံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်
(1) Is this your first time to Myanmar?
ဒါက မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တာ မထမအကြိမ်ပါလား
(2) What was your first impression of Myanmar?
ခင်ဗျားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ရောက်ရောက်ချင်း ထင်မြင်ချက်လေးက ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ပါလဲ (ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါသလဲ)
အလုပ်လုပ်ချိန် နည်းပါးလွန်းသော မြန်မာဝန်ထမ်းလောက [သရ၀ဏ်(ပြည်)]
အကျဉ်းကျခံ အမတ်လောင်း ဆေးကုသရေး အခက်ကြုံ
ရွှေပြည်သာတွင် အရက်အတူ သောက်စားရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
ဓားဖြင့် ခုတ်မည်ဟုပြောဆို၍ ဆိုင်ကယ်အား လုယူထွက်ပြေး
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် မောရဂီဝါရပ်ကွက် တွင် နေအိမ်(၈) လုံး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
ကိုးပင်-သာဂရကားလမ်းတွင် ယာဉ် တိမ်းမှောက်၍ ခြောက်ဦးသေဆုံး၊ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
အီရန်နဲ့ ပါကစ္စတန် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်
IS ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ သုတ်သင်
IS အဖွဲ့ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်သူ သေဆုံးကြောင်း အမေရိကန်ပြော
တရုတ် website ဝန်ထမ်းတွေကို ဖမ်းဆီး
ပါကစ္စတန် မြွေအလမ္ပာယ်ဆရာ (ရုပ်/သံ)
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံ မိုးခေါင်မှု (ရုပ်/သံ)
ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်နဲ့ ဂုံးကျော်တံတားများ (ရုပ်/သံ)
အိပ်ရာက နိုးတော့ အတော်လေးမှောင်၍ နေပြီ။ ခေါင်းရင်းက ပြတင်းတံခါးကို မပိတ်မိသဖြင့် အအေးမိချင် သလိုဖြစ်လာသည်။ အိပ်ရာပေါ်မှဆင်းလိုက်တော့ မိုက်ခနဲဖြစ်ချင်သည်။ အားနည်းနေရော့သလား။ အိမ်အပြင် မထွက်ဘဲ အိမ်ထဲတွင် ရှိသည့်စားစရာများကိုသာ ပြီးစလွယ်စားနေခဲ့သည်များက အာဟာရမဖြစ်မြောက်လေ ဘူးလား။
ထိုအခါမှ တစ်နေကုန် ဘာမှ မစားရသေးတာကို သတိရလိုက်သည်။ ဗိုက်ထဲမှာလည်း ဆာလောင်နေသလား၊ လေများဖြင့်ပဲ ပြည့်ကျပ်နေသလား ဘာမှမခံစားရတော့သလိုပင်။
လက်ရှိကာလမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ရုပ်သံမီဒီယာတွေကို အစိုးရနဲ့ အစိုးရတပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အစိုးရနဲ့နီးစပ်သူတွေကသာ ချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ ရုပ်သံမီဒီယာလုပ်ငန်းဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းရာထောင်ချီရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်များတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပြီး ပြည်သူအားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုပ်သံမီဒီယာလုပ်ငန်းဟာ နိုင်ငံရေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အောက်မှာ ပိပြား ငြိမ်ဝပ်စွာ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရလို့ မီဒီယာဆိုင်ရာ အသိပညာအပါအ၀င် ပညာရေးမှာ အများကြီး ယုတ်လျော့ ကျဆင်း အားနည်းခဲ့ရပါတယ်။ အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာ ရုပ်သံမီဒီယာလောကရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့နဲ့ ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းမှာ ဟောင်း/ သစ် မခွဲခြားဘဲ ရေပြင်ညီမျှတမှုတွေ ရဖို့ ``ရုပ်သံလွှင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းရဲ့အနာဂတ် ဘယ်လဲ၊ ဘာလဲ`` ခေါင်းစဉ်နဲ့ DVB ဒီဘိတ်ကို မတ် ၂၀ က တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
"အဖွားကြီးတစ်ယောက်တည်း ဝန်ကြီးဌာန ၄ ခုစာ တာဝန်ယူတဲ့ကိစ္စလေဗျာ"
"ဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျ အဲ့ဒါကို တော်တယ်တွေ ၊ အကွက်ရွှေ့တာမိုက်တယ်တွေ၊ တို့မေမေ သားတို့မေမေ တွေ လျှောက်ပြောပြီး မြှောက်ပေးနေတော့ ဟိုက မာန်တက်ပြီးလျှောက်လုပ်ရင် အမြန်ကိစ္စချောသွားမှာပေါ့ဗျ"
♠ အယ်ဖြူ မှောက်ထားသောဖဲတချပ် သို့ အယ်ဖြူ ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး ♠
တင်ဇာမော်က ချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ ပီတီအယ်လ် စတူဒီယိုက
Vocal အသံခန်းထဲကနေ သီချင်းကိုဆိုရင်းနဲ့ မျက်ရည်တွေ
ဘာဖြစ်တာလဲဟ ဆိုတော့ နားကျပ်ကိုဖြုတ်ပြီးထွက်လာတယ်
ဘာဖြစ်လို့ လည်းမေးပြန်တော့ ကိုအယ်ဖြူကို သတိရလာလို့တဲ့။
Go on (1) to continue ဆက်လုပ်သည်
Please go on with what you are doing.
ကျေးဇူးပြုပြီး ခင်ဗျား လုပ်လက်စကို ဆက်လုပ်ပါ ။
We really can't go on living like this. ( go on + Ving)
ကျနော်တို့ တကယ်ပဲ ဒီအတိုင်း ဆက်ပြီး မနေထိုင်နိုင်တော့ပါဘူး
စတော့ရှယ်ယာတွေအကြောင်း ဆက်ပါရစေဦး ခင်မောင်ညို(ဘောဂဗေဒ)
၁၉၉၀ ခုနှစ်လောက်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးတော့မယ် ဆိုတဲ့အခါ၊ ထင်ရှားတဲ့ စာရေးဆရာကြီး တစ်ဦးက ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို စတင်လေ့လာနေပြီလို့ ပြောဘူးတာ မှတ်မိတယ်။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ (၁၉၉၆) ခုနှစ်လောက်ကတည်းက လေ့လာခဲ့ပြီး ခုအခါမှာတော့၊ အားနည်းချက်တွေကို ပိုပြီး သတိထား လေ့လာမိ၊ ပြောမိဟောမိ၊ ရေးသားမိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတောင်၊ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့၊ မကောင်းကြောင်းတွေ သိပ်မပြောပါနဲ့၊ မရေးပါနဲ့လို့ သတိပေးပါတယ်။ တကယ်လည်း မရေးချင်ပါ။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို တာဝန်ရှိသူတွေက တည်ထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ ကိုယ်က မလိုတမာရေးတာမျိုးဖြစ်မှာ စိုးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တွေ့ကြုံနေရတာတွေက စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ပြည်သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံချင်တဲ့သူတွေ သိထားဖို့ လိုအပ်မယ်လို့ ပိုပြီးသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
ISIS အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွှယ်သူ ၁၃ ဦးကို မလေးရှားဖမ်းဆီး
မြောက်ကိုရီးယား တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဆီးရီးယား ပြည်တွင်းစစ်တွင် ပါဝင်လျက်ရှိ
နာတာရှည် အမေအိုကို သနား၍ လည်ပင်းကို ဓားဖြင့် သားသူဖြစ်သူမှ ခုတ်သတ်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့် အဖွဲ့ ၀င် ၄ ဦး၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် အကျဉ်း
တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေကို ခြွေတာကြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာကြား
လောကကြီးကိုကြည့်ရင် တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကြွေးတွေဆပ်နေတာ ကိုပဲ မြင်နေမိတယ်၊ လူတွေကိုကြည့်၊ ကြွေးကင်းတဲ့သူရယ်လို့ မရှိဘူး။ တလှုပ်လှုပ်နဲ့ ကြွေးဆပ်နေကြတယ်။ ကြွေးဆိုတဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးတွေ ပိနေကြတယ်။
အကြွေးဆိုတာ (၁) ဥစ္စာကြွေး၊ (၂) ရန်ကြွေး၊ (၃) ချစ်ကြွေး၊ (၄) နှုတ်ကြွေး၊ (၅) ၀ဋ်ကြွေးရယ်လို့ အကြွေးငါးပါး ရှိတယ် မဟုတ်လား။ လောကကြွေးဆိုတာကတော့ ဘယ် တော့မှလည်း ဆပ်လို့မကျေနိုင်ဘူး။ ကြွေးတွေဆင့်ကာဆင့်ကာသာ တင် နေတော့တာပဲ။
တွက်ချက်နည်းကပိုလွယ်ပါတယ် အလျား×အနံ×အမြင့်=ကုဗပေ ရတယ်
အဲဒီကုဗပေနဲ့ ၁ ကုဗပေမှာ ရေ ၆•၂၅ ဂါလံ နဲ့ မြှောက် ရတာဝင်ဆန့်တဲ့ ရေဂါလံပေါ့။
ရေးပြီဆိုမှတော့ တော်တော်လေးရောက်အောင် ရေးလိုက်ချင်တဲ့အတွက် တင်ဆက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် ၊ အတော်အသင့် လေ့လာသူအဆင့်မှာတော့ မလိုအပ်သေးပါဘူး ။ သိချင်သူများ အတွက်တော့ သိဖို့ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတဆိုတာ ပိုတယ်မရှိပါဘူး ။
၀ါကျထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိပြီးရွတ်ဆိုရမယ့် စကားလုံးတွေ (content/lexical words) နဲ့ ဖော့ပြီးရွတ်ဆိုရမယ့် စကားလုံးတွေ (structure/function words) အကြောင်းကို ပြောခဲ့သလို ၊ ဖိသံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြား အချိန်အတိုင်းအတာ ညီတူဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောခဲ့ပါတယ် ။
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နေရာ ဦးညီပုကိုသာ ခန့်အပ်မယ်လို့ NLD ပြော
တရုတ်တွင် ဒေါ်လာ ၄၇ ဒသမ ၈ သန်းတန်ကြေးရှိ စပါးကြီးမြွေအရေခွံ ၂ သောင်းခွဲ ဖမ်းဆီးရမိ
ထိုင်းက မြန်မာအိမ်အကူတွေရဲ့ အနာဂတ် (ရုပ်/သံ)
တက္ကစီ Ygn-CC 1085မှ ဒရိုင်ဘာ၊ ခရီးသည်မိန်းကလေးအား ဖုန်းဖြင့် အပြာကားပြ
လူထုဆန့်ကျင်ရေး မလုပ်မိကြရန် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် သတိပေးပြောကြား
အီရတ်မှာ IS ရန်ကာကွယ်နေတဲ့ ကာဒ်တပ်ဖွဲ့ (ရုပ်/သံ)
အမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်တွေ မူစလင်ကို ပိုအာရုံစိုက်လာ (ရုပ်/သံ)
နုိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးညွှန့်နှင့် အဖွဲ့ ၀င် ၈ ဦး၏ ကိုယ်ရေး ရာဇဝင် အကျဉ်း
NLD နဲ့ ANP သဘောတူညီချက်ရ
ဥရောပ မကြုံစဖူး အန္တရာယ် တွေ့နေကြောင်း ယူရိုပိုလ် အကြီးအကဲ သတိပေး
သတို့သမီးလောင်းတစ်ဦး အသားဖြူဆေးစား သေဆုံး
ရွှေထီးဟိုတယ်တွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးမှုမှ သက်သေတစ်ဦးကို စစ်ဆေးရန် ရှာဖွေနေဆဲဟုဆို
လာအို မြောက်ပိုင်းတွင် ဘတ်စ်ကား တစ်စီး တိုက်ခိုက်ခံရမှု၌ တရုတ်နိုင်ငံသား ၆ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိ
လော့စ်အန်ဂျလိစ် လေဆိပ်တွင် လေယာဉ်ဖြင့် ကိုကင်းမှောင်ခိုသယ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းသူ တစ်ဦးအားဖမ်းမိ
ဖိုး စိုး သူ
အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားလို့မရဘူး။ အဖေဟာ မနက် ၂ နာရီဆိုတာနဲ့ ခြံတံခါးရှေ့မှာ စက်ဘီးရပ်နေကြ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူနေကြ။ ခြံရှေ့ထိုင်ခုံလေးမှာ ခဏထိုင်ပြီး ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ဖွာနေကြ။ ပြီးတော့မှ အိမ်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ အဖေဟာ ဆယ်မိုင်ခရီးကို စက်ဘီးနဲ့ အသွားအပြန်လုပ်တယ်။ အဖေဟာ တက်ကြွတဲ့အလုပ်သမား။ အဖေဟာ သားဆိုးတစ်ယောက်ရဲ့ဖခင်။ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်ပွန်း။ အဖေဟာ စက်ဘီးတစ်စီးကလွဲပြီး ဘာမှ မပိုင်ခဲ့တဲ့သူ။ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ သုံးထောင်ရှိရင် တစ်ထောင်ကို သားအတွက် ထားပေးတတ်တဲ့သူ။
လူတွေဟာ ကိုယ်ဘာဝယ်မလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆုံးဖြတ်နေတာပဲလို့ ထင်ထားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အရောင်းသမား (marketer) တွေရဲ့ မသိမသာ လွှမ်းမိုးစေစားတာကို ခံနေကြရတာပါ။
လူ့ဦးနှောက်ရဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းအားဟာ အင်မတန်မြင့်မားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိကြီးကြီးထားရမယ့် အားနည်းချက်တချို့ရှိပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်များစွာကို ခြုံငုံစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ သေသေချာချာ အချိန်ယူစဉ်းစားတာကို မလုပ်တော့ဘဲ ဖြတ်လမ်းနည်းလိုက်ပြီး ရုတ်ချည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးကို ကျနော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေဟာ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
‎Yethuya Naing‎ to Myanmar Breaking News
သမ္မတလောင်းရွေးတဲ့နေ့က ကိုမင်းကိုနိုင်က ထိုသို့ရေးသား ဟစ်ကြွေးခဲ့သည်။
တချို့က လက်ယာကို ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ တွေလို့ ခေါ်ကြပြီး၊ လက်ဝဲကို တော်လှန်သူတွေလို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။ ဒါလည်း မမှားပါဘူး။ တချို့ကတော့ လက်ယာကို လူချမ်းသာတွေနဲ့ စီးပွားရေး တစ်ခုကိုပဲ မျက်နှာသာပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ စွဲကိုင်သူများနဲ့ လက်ဝဲကို လူအများ တန်းတူရေး (ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်) ဝါဒ စွဲကိုင်သူများလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ လက်ဝဲ၊ လက်ယာ ဝါဒတွေမှာ သူတို့ စွဲကိုင်တဲ့မူဝါဒတွေက ကွဲကြပါတယ်။
ကျနေ့ာ် ငယ်သူငယ်ချင်း အပျိုကြီးတစ်ယောက်က စင်္ကာပူကို လာလည်ချင်လို့တဲ့ ကျနေ့ာ်ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်။
ပတ်စပို့တော့ ရှိတယ်တဲ့၊ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ငွေသိပ်မရှိလို့ လာချင်ပေမယ့် မလာနိုင်သေးဘူးဆိုပြီး ညည်းနေတယ်။
အဲဒါ သူကပြောတယ်... ...
"စားဖို့အိပ်ဖို့ အတွက် နင် စရိတ်တဝက်ခံပေး"... တဲ့။
တဖက်သတ်အချစ်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကတော့ ပြင်းထန်မယ်လို့ အားလုံးထင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း ခံစားနေရတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ အားလုံးက ကိုယ်လို သူလိုပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေကော ဘယ်လို ခံစားနေရသလဲဆိုတာကို ဝေငှလိုက်ကြရအောင်လား။
၁။ သူ့အရှေ့ရောက်ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို စကားလုံးတွေက ထွက်မလာတော့ပါ။
၂။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောနေရင်း သူ့အကြောင်းပါလာရင် ရင်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး ရင်တွေခုန်လာတယ်။
အမေကြီး ဘာကြီးလဲ မဖားတတ်ပါ။ ပြီးတော့ ကျနော့်ညာဉ်ကိုက Reality ကိုပဲ ဦးစားပေးကြည့်တတ်တယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းမယ်ဆို ဘယ်သူ တက်တက်ပါ။ အဘက်ဘက်က ခေါင်းအေးအေးထား စဉ်းစားကြည့်ပြီး မှ ဒေါ်စုသာလျှင် ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အသင့်တော်ဆုံးသော တစ်ဦးတည်းသောခေါင်းဆောင်အဖြစ် ယူဆဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အကြောင်းပြချက်က ၁၀ ခု ရှိပါတယ်။
အသက်(50) ရောက်ပြီဆိုရင် လူ့သက်တမ်းအရ အရွယ်အိုချိန်ကို စတင်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ခဲပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကျန်ရှိတဲ့ သက်တမ်းမှာ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ နေနိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
ShweMOM ပရိသတ်ထဲမှာ အသက် 50 အရွယ်ကို ရောက်တော့မယ့် ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်တို့များ ရှိနေခဲ့ရင်၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့နဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်ရင် အောက်ပါအချက် (25) ချက်ကို အကြံပြုပေးကြပါလို့။
"အခြေခံဥပဒေကို ပြင်မယ် ဖျက်မယ် ပြောခဲ့တာ ဦးလေးတို့ အမေစုပဲ မဟုတ်ဘူးလား?"
"အခုရွေးကောက်ပွဲ နိုင်သွားတော့လည်း အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေနဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးလား?"
"တခြားအခြေခံဥပဒေနဲ့ပြိုင်ရင်ရော မင်းတို့က လက်ခံမှာ မို့လို့လား?"